सडकदेखि इण्डियन आइडलको ताजसम्म,यस्तो छ... :: एजेन्सी :: Setopati
एजेन्सी मुम्बई, फागुन १३
आइतबार राति सम्पन्न भएको ११ औं संस्करणको 'इण्डियन आइडल'को उपाधि सनी हिन्दुस्तानीले उचाले।
सनीको जितले फुटपाथमा जुत्ता पालिस गर्दै हिँड्ने २१ वर्षे ठिटोलाई एउटा छुट्टै परिचय दिलाइदिएको छ।
उनी यस संस्करणको उपाधिका दह्रा प्रतिष्पर्धी हुन भन्ने कुरा उनले अडिसनबाटै प्रमाणित गरिसकेका थिए।
'हुन त बोल्न हुँदैन होला तर यस्तो लाग्यो अगाडि नुशरत साहब उभिनु भएको छ।'
अडिसनमा उनले चर्चित सुफी गायक नुशरत फतेह खानको 'आफ्री आफ्री' बोलको गीत गाएका थिए।
'मैले सोचेकै थिएन कसैले यस्तो गीत गाउनेछ त्यो पनि प्रत्यक्ष', अनुले त्यतिबेला भनेका थिए।
'म दिलदेखि यति खुशी छु कि, बताउँनै सक्दिन। तपाईंको आमालाई धन्यवाद छ जसले तपाईंलाई यहाँ ल्याउन यति मेहेनत गर्नुभएको छ', नेहाले भनिन्।
'मलाई घरघर गएर मेरी आमाले चामल मागेको एकदमै राम्रो लाग्दैन', अडिसनमा उनले भनेका थिए।
उनले बुट पालिस गर्नुको एउटै उदेश्य थियो- पैसा कमाउने र आमालाई सजिलो पार्ने।
अडिसनमा सनीको दुःखले भरिएको कथा सुनेपछि भावुक बनेकी नेहाले उनलाई ढाडस दिदैं जीन्दगीमा आएका मौकाले तिनलाई भुलाउने बताएकी थिइन्।
'तिम्रो आँखामा जुन आँशु छ म त्यसलाई अनुभव गर्न सक्छु। एउटा मौका मानिसका लागि कति ठूलो हुन्सक्छ, मलाई थाहा छ', उनले सनीलाई ढाडस दिदैं भनेकी थिइन्।
यद्यपी विशाल भने सनीलाई लिएर सुरुमा दोधारमा थिए।
'सनी मलाई तिम्रो गायकीले अनौठौ ठाँउमा ल्याइदिएको छ। तपाईंलाई सुनेपछि मेरो दिमाग पड्किएको छ। मैले आजसम्म नुशरत साहेबलाई यसरी गाएको कहिले पनि सुनेको छैन। उठेर तारिफ त मैले पनि गरें तर तपाईंले गाउनुभएको हर एउटा सुर नुशरत साहेबको हो। नुशरत साहेबको हामी सबै भक्त हौं। मैले १० लाख पटक यो गीत सुनेको हुँला। र मैले तपाईंले याद गरे जसरी यसलाई याद गर्न खोजे पनि जीन्दगी भर सक्दिन।', उनले भनेका थिए 'त्यो अत्यन्तै प्राकृत छ। तपाईले गीतको रटान एकदमै राम्रो मार्नुभएको छ। एकदमै तगाडा। यसमा दुईटा समस्या छन्। एउटा गीतलाई रट्नु प्रतिभा हुन सक्दैन, गीत गाउनु भएको दोश्रो कुरा हो। मलाई थाहा छैन अगाडी गएर गाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। एक वर्ष इन्डियन आइडलमा जान्छु भनेर तपाईले यो गीतमा बिताउनु भएको छ भने। मलाई थाहा छैन अर्को गीतलाई के गर्नुहुन्छ?'
त्यसपछि उनले 'जान रे जान ले' बोलको गीत गाए।
'सिक्दै नसिकी कसैले यस्तो कसरी गाउँन सक्छ? म केही बोल्न सकिरहेको छैन। यदी यो सबै साँचो हो र तपाईंले गीत सुनिसुनि मात्रै यस्तो हुनुभएको हो भने तपाईंलाई थाहा छैन तपाईं के हो भनेर। यहाँबाट निस्केपछि मानिसहरूले हामीले तपाईंलाई छानेका हौं भनेर सम्झिनेछन्।', माइक दिदैं सनीको प्रशंसामा विशालले आफ्नो यस्तो भनाइ राखेका थिए।
उनले अडिसनको भिडिओ क्लिप पोस्ट गर्दै आफूलाई भिडिओ हेरेर आँशु आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उनी साथीहरूसँग उधारो मागेर इण्डियन आइडलको अडिसनमा पुगेका थिए। सुरुआती दिनमा मानिसहरूका जुत्ता पालिस गरेर तथा बस र रेल स्ट्यान्डमा गीत गाएर उनले परिवारको गुजारा चलाउन मद्दत गर्दै आएका थिए। उनकी आमा बेलुन बेच्दै हिँड्थिन्।
'मलाई आज पनि याद छ, मेरा साथीहरू मलाई रियालिटी शोमा जान भनिरहन्थे तर मसँग अडिसन दिन जान सक्नेगरी पैसा थिएन। मलाई साथीहरूले ११ औं इण्डियन आइडलमा अडिसन दिन भने। एउटा साथीले मलाई पैसा सापटीसमेत दियो', उनले आफ्नो इण्डियन आइडलको यात्रा बारेमा भने।
'मेरी आमाले मलाई अडिसनमा जान दिइराख्नु भएको थिएन। मैले आमासँग एक मौका दिन भने अनि उहाँ मान्नुभयो। मेरो कुनै तयारी थिएन। मेले नुशरत साहेबको २-३ वटा मात्र गीत सुनेको थिएँ। तिनै गीत अडिसनमा गाएँ र छनौट हुन पुगे।'
शोमा गएपछि उनको चर्चा चुलिन थाल्यो। उनले शोका दौरान नै सिनेमामा गाउने अवसर पाए। उनले पहिलो ब्रेक इमरान हाशमीको 'द बडी'को लागि पाए भने दोश्रो मौका कंगना रनौतको 'पंगा'को लागि पाए।
शोको फाइनलमा अभिनेता आयुष्मान खुर्राना आफ्नो प्रदर्शनरतः 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान'को प्रचारका लागि पुगेका थिए। उनले शो जित्नेलाई टि-सिटिजले बनाउने आफ्नो अर्को सिनेमामा गाउन मौका दिने घोषणा गरे। विजेता बनेका सनीलाई सो मौका पनि मिलेको छ।
'इन्डियन आइडल ११' बनेसँगै भारतका साना शहरमा रहेर ठूला सपना देख्नेहरूका लागि सनी एउटा प्रेरणाका श्रोत बनेका छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १२, २०७६, २२:३५:००